Nin waddo 2.5 KM ah ku xardhay “Waan ku jeclahay” | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Nin waddo 2.5 KM ah ku xardhay “Waan ku jeclahay”
Nin waddo 2.5 KM ah ku xardhay “Waan ku jeclahay”
Ninkaan ayaa waddadaan ku qoray ereyo uu ku muujinayo jaceyl uu u qabo gabar xariir kala dhexeeyay
India (Halqaran.com) – Nin aan lamagacaabin oo ku nool magaalada Kolhapur ee dalka Hindiya ayaa waddo marta gobolka Maharashtra ku xardhay ereyo uu ku muujinayo jaceyl uu u qabo gabar uu haasaawe kala dhexeeyo.
Si uu kalsooni dheeraad ah ugu beero wuxuu sameeyay waddo laami oo dhererkeedu yahay 2.5 KM ayuu ku qoray ereyo uu ku muujinayo jaceylka xad dhaafka ah uu u qabo gabadhaas.
Ereyadaan oo far waa weyn ku qornaa ayaa waxaa ka mid ahaa “Waan ku jeclahay” “Waan kuu xiisay” iyo kuwa kale oo dhammaan uu ku cabbirayey jaceylka uu u qabo gabadha uu xiriirka kala dhexeeyo.
Dadka deegaanka ayaa aad ula yaabay markii ay soo tooseen iyadoo jidka ay ku xardhan yihiin ereyadaan oo ku qornaa rinji cad. Waxaana sawirro laga qaaday aad loogu wadaagay baraha bulshada.
Nin waddo ku xardhay